စစ်မှန်သောဘဝရှိဆရာများ - Sam Dowd - Austin Partners in Education
Austin ISD ကျောင်းအခြေပြုစေတနာ့ဝန်ထမ်း
စစ်မှန်သောဘဝရှိဆရာများ - Sam Dowd
ဇန်နဝါရီ 30, 2020
ဆရာများသည်လူငယ်များ၏ဘ ၀ များတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်ပြီး၎င်းတို့အားဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်ကူညီခြင်းနှင့်အနာဂတ်အခွင့်အလမ်းများသို့ဆက်သွယ်မှုများပေးခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်သည်။ ဇန်နဝါရီလသည်အမျိုးသားလမ်းညွှန်လဖြစ်ပြီး၊ National Mentoring Partnership သည်ဆရာများ၏ပုံပြင်များကိုမီးမောင်းထိုးပြနေသည် #MentorsIRL ကိုအသုံးပြုပြီးအွန်လိုင်း။ Austin Partners in Education တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျောင်းသားများ၏ဘဝတွင်ဆရာများ၏ကောင်းကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုနေ့တိုင်းကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်သည်။ ထိုလကုန်ခါနီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်နှင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏များစွာသောအံ့သြဖွယ်လမ်းညွှန်များကိုသာပြသမည်ဖြစ်သည်။ ကျောင်းစာသင်နှစ်တစ်လျှောက်တွင်အပတ်စဉ်ပြသခဲ့သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်များအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်လမ်းညွှန်အတွေ့အကြုံများကို hashtags #APIEShowsUp, #MentorsIRL နှင့် #MentoringMonth ကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်ုပ်တို့နှင့်သင်၏အတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေနိုင်သည်။
Sam Dowd | Q & A
Sam Dowd သည် Austin Partners in Education တွင်ပညာရေးကို ၂ နှစ်ကြာသင်ကြားပေးခဲ့ပြီးလက်ရှိတွင်အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်ကျောင်းသားတစ် ဦး ကိုသင်ကြားပို့ချပေးနေသည်။
A: ငါ Wendi Gordon [APIE ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဒါရိုက်တာ] ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသိကျွမ်းခဲ့ပြီး APIE နှင့်သူမအလုပ်အကြောင်းပိုမိုသိရှိပြီးနောက်ငါပါ ၀ င်ချင်ကြောင်းသိခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ကျွန်တော်ဟာပညာရေးကိုတန်ဖိုးထားသောအိမ်ထောင်စုများမှာကြီးပြင်းဖို့ကံကောင်းခဲ့ကြတာပါ။ အဲဒီအတွေ့အကြုံတွေကငါတို့ကိုအရွယ်ရောက်သူတွေအနေနဲ့ပုံဖော်ရာမှာအထောက်အကူပြုတယ်ဆိုတာငါတို့သိတယ်။ ထိုစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်လူငယ်များကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်နှင့်သူတို့၏ပညာရေးကိုရှေ့သို့ချီတက်ရန်လိုအပ်သောအရင်းအမြစ်များကိုပြင်ဆင်ရန်အခွင့်အလမ်းရလိုခဲ့သည်။
မေး။ ။ ဆရာတစ်ယောက်အနေနဲ့ခင်ဗျားရဲ့အတွေ့အကြုံကဘယ်လိုရှိပါသလဲ။ ဘယ်လိုနှစ်ပေါင်းများစွာပြောင်းလဲသွားပြီလဲ
A: ဆရာတစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကအခုထိအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ပါပဲ။ အစတွင်ကျွန်ုပ်ကျောင်းသားနှင့်ကျွန်ုပ်သည်တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်သိရန်အချိန်အနည်းငယ်ယူခဲ့ရသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်တစ်သမတ်တည်းဖြစ်သောအချိန်ဇယားတစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးသည်နှင့်အတူအတွေ့အကြုံများထပ်မံခံစားနိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်သူသည်သူ၏ကျောင်းတွင်အလွန်ပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိရန်ကူညီသည်။ ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ကျွန်တော်ဟာဘောလုံးပွဲတွေ၊ ဂစ်တာပွဲတွေမှာသူ့ကိုကူညီနိုင်ခဲ့တယ်။ သူ၏ပွဲတော်များတွင်သူ့ကိုထောက်ပံ့ရန်ပေါက်ကွဲခြင်းဖြစ်လေသည်!
မေး။ သင်ကြားပို့ချခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ဘာကိုနှစ်သက်ပါသလဲ။ သင့်ကိုတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ပြန်လာစေဖို့ဘာတွေလုပ်ပေးသလဲ
A: ကျွန်ုပ်၏ကျောင်းသားအားထောက်ခံခြင်းနှင့်အားပေးခြင်းရင်းမြစ်ဖြစ်ခြင်းသည်အထက်တန်းကျောင်းတစ်ခါတစ်ရံမည်မျှခက်ခဲကြောင်းမှတ်မိနိုင်သောကြောင့်ကျေနပ်အားရမှုရှိခဲ့သည်။ သူ၏အောင်မြင်မှုများကိုဂုဏ်ပြုနိုင်ပြီးသူ၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုသည်ကြီးမားသောအခွင့်အလမ်းများကိုဖန်တီးပေးသည်ဟုသူ့အားသတိပေးနိုင်ခြင်းသည်လည်းအကျိုးသက်ရောက်ခဲ့သည်။ သူ၏ဉာဏ်ရည်နှင့်အလုပ်ကျင့်ဝတ်တို့ကိုအတည်ပြုနိုင်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်။ ရာသီတိုင်း၌သူ၏ယုံကြည်မှုတိုးများလာသည်ကိုငါတွေ့မြင်နိုင်သည်။
မေး အဘယ်ကြောင့်သင်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် mentee အတူတူအလုပ်လုပ်ရန်ရွေးချယ်ကြသနည်း
မေး သင်ဝေမျှနိုင်သောသင်၏ mentee အကြောင်းအကြိုက်ဆုံးပုံပြင်များရှိပါသလား။
A: ကျွန်တော့်ဇနီးနှင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကျောင်းသားအားသူ၏မိဘများမလုပ်နိုင်သည့်အချိန်တွင်သူ၏ဂစ်တာတီးဝိုင်းတစ်ခုတွင်ကူညီခဲ့သည်။ သူ၏ဖျော်ဖြေမှုအပြီးတွင်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမြင်တွေ့ရသောအခါသူမည်မျှပျော်ရွှင်ခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်မှတ်မိသည်။ သူဘယ်လောက်အထိကောင်းကောင်းလုပ်ခဲ့သလဲ၊ သူ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့်ငါတို့ဘယ်လောက်ဂုဏ်ယူခဲ့တယ်ဆိုတာသူ့ကိုပြောပြရတာအရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။
မေး။ ။ ခင်ဗျားရဲ့ mentee အပေါ်ဘယ်လောက်ကြာရှည်မလဲ။
A: သူ၏ဘဝ၏ဤရာသီအတွင်းကျွန်ုပ်၏အားပေးမှုနှင့်တုံ့ပြန်မှုများကိုသူတန်ဖိုးထားနိုင်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်သွယ်မှုအားလုံးမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်သည်သူ၏ပညာရေးနှင့်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်သူ့ကိုတစ်ပြိုင်နက်စိန်ခေါ်ရန်နှင့်အတည်ပြုရန်ကြိုးစားသည်။ ငါဟာသူ့ဘ ၀ မှာစိန်ခေါ်မှုနဲ့အလုပ်များတဲ့ရာသီဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူ့ကိုအမြဲတမ်းသတိပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်သူကမယုံနိုင်လောက်အောင်တောက်ပနေလို့သူ့မှာတာဝန်တွေရှိပြီးမျှော်လင့်ချက်တွေရှိတယ်။
မေး အဘယ်ကြောင့်တစ်စုံတစ် ဦး ကဆရာအဖြစ်လုပ်အားပေးသင့်သလဲ
A: APIE မှတဆင့်စေတနာ့ဝန်ထမ်းခြင်းသည်မယုံနိုင်စရာလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ AISD ၏ကျောင်းသားများကိုပံ့ပိုးရန်ဤမျှမမောနိုင်မပန်းနိုင်အလုပ်လုပ်သည့်အခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်မစဉ်းစားနိုင်ပါ။ APIE ကိုသင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့်အခါလူငယ်တစ် ဦး ၏ဘ ၀ ကိုနက်နက်နဲနဲသက်ရောက်နိုင်သည့်အခွင့်အရေးရှိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်လူငယ်များသည်သူတို့၏ပညာရေးဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းများအရေးကြီးကြောင်းသတိပေးရန်လိုအပ်ပြီး၊
မည်သို့သင်ကြားနည်းသင်ရမည်ကိုစိတ်ဝင်စားပါသလား။ မှာငါတို့ website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု www.austinpartners.org/getinvolved သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏စေတနာ့ဝန်ထမ်းစုဆောင်းရေးညှိနှိုင်းရေးမှူးအက်ရှလေအား ayeaman@austinpartners.org သို့အီးမေးလ်ပို့ပါ။
Prevရှေ့စစ်မှန်သောဘဝရှိဆရာများ - Rick Schumacher
A Slice of APIE: June 2021 Newsletter ဇွန် 11, 2021
APIE Welcomes Four New Board Members ဇွန် 10, 2021
A Q&A with APIE Volunteers ဧပြီ 28, 2021
တစ်နေ့တာမှတစ်လ! မတ် 25, 2021
APIE ၏အချပ်: မတ်လ 2021 သတင်းလွှာ မတ် 17, 2021
ပညာရေးအတွက် Austin အပေါင်းအဖေါ်များ
P ကို: 512-637-0900 | F ကို: 512-414-3116
EN	 ES	 VI	 ZH	 TL	 DE	 FR	 HI	 UR	 KO	 AR	 MY